IPhone-ka soo socda wuxuu yeelan karaa shaashado dhan 120Hz | Wararka IPhone
Haa, waxaan la joognay kaliya siPhone-ka cusub muddo bil ah laakiin waxaan haddaba ka hadlaynaa astaamaha ay ku heli karaan moodellada ay Apple soo bandhigi doonto sannadka 2020-ka, iyo midkood wuxuu noqon karaa shaashad cusub oo heerkeedu dhan yahay 120Hz. Waxaa jira horeyba alaabooyinka Apple ee leh shaashadda noocan ah, gaar ahaan iPad Pro, laakiin tani waxay noqon doontaa shaashadii ugu horreysay ee OLED leh 120Hz tan iyo markii ay iPad-yada kor u qaadaan shaashadda LCD.
Waana in xilligan ay jiraan moodooyin durba-heer sare leh oo shaashadaha gaara 90Hz (xitaa qaar ka mid ah nooca 120Hz aan heli karno), sidaa darteed Apple horayba wuxuu u bilaabay inuu u baahdo shaashadahooda ProMotion ee aadka u fiican ee ka soo baxa iPad-ka oo wata 120Hz waxay gaadhaan iPhone-ka, oo leh dhammaan hagaajinta ay tani u baahan tahay.
Qiyaasta cusbooneysiinta shaashadu waxay ka kooban tahay inta jeer ee ilbiriqsi kasta waxyaabaha la soo bandhigo shaashadda la cusbooneysiiyo. Taleefannada casriga ahi badanaa waxay leeyihiin 60Hz shaashadood, taas oo macnaheedu yahay hal ilbiriqsi hal mar ayaa shaashadda la cusbooneysiiyaa 60 jeer. Yaan lagu khaldin FPS (wareegyada halkii ilbiriqsi), in kastoo ay isku dhow yihiin. Fiidiyow ama ciyaar 60fps ah waxay ka dhigan tahay inay soo bandhigeyso 60 sawir ilbidhiqsi kasta. Haddii shaashaddu leedahay 60Hz iyo waxa ku jira 60fps, wax walbaa waxay ku habboon yihiin si dhammaystiran natiijaduna way u jilicsan tahay. Haddii shaashaddu tahay 60Hz oo waxa ku jira ay yihiin 30fps, qalabka waa inuu nuqul ka sameeyaa sawir kasta (30 × 2 = 60) oo u tarjumaya dheecaan yar.
Daqiiqadan waxaa jira waxyaabo aad u yar oo 90fps ah, oo aad uga yar 120fpsSidaa darteed, si aad u daawato waxyaabaha ku jira warbaahinta badan ama ciyaaro, shaashadaha 60Hz way ka badan yihiin. Maaddaama bandhigyada 90Hz iyo 120Hz ay ​​sii kordhayaan, horumariyeyaashu waxay la qabsan doonaan cayaartooda si ay uga faa'iideystaan, laakiin tan hadda ma ahan kiiska. Si kastaba ha noqotee, si cad ayaa loo ogaan karaa markii la rogayo bogga ama iyada oo loo marayo menus-ka arjiga, tan iyo markii shaashadda la cusbooneysiiyo marar badan ilbiriqsi kasta, natiijada ayaa ah animations iyo dhaqdhaqaaqyo aad u jilicsan, oo aan boodboodi karin.
Mana ilaabi karno wax muhiim ah. Waxa ugu horreeya ayaa ah inaad "u guurto" cayaaraha si fiican 60fps ama ka badan, waxaad u baahan tahay qalab wanaagsan. Arrinta labaad ayaa ah isticmaalka batteriga wuu kordhayaa, sababo la xiriira shaqada ku lug leh qabashada maaddadan iyo sababtoo ah shaashadda ayaa la cusbooneysiiyay waqtiyo badan oo sidaas awgeed baytariga ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » IPhone-yada soo socda waxay lahaan karaan bandhigyo gaaraya 120Hz
Waxay isbarbar dhigayaan sawirrada xiddigaha laga qaaday Pixel 4 iyo iPhone 11 Pro
Isbarbardhiga macquulka ah ee maalinta: iPhone 11 Pro vs Canon 1DX Mark II